IPhone ma yeelan doonaa akhristaha sawirka faraha gadaashiisa? | Wararka IPhone
Galaxy S8 wuxuu dhaqaajin doonaa akhristaha faraha: maxaa Apple sameyn doonaa?
Sannadkan waxaa loo arkaa inuu yahay mid gaar u ah shirkadda Apple, dhammaanteen waan ognahay, maadaama ay tahay sannad-guuradii tobnaad ee ka soo wareegtay markii la bilaabay iPhone-ka. Tani waxay ka hadlaysaa nooca taleefankaaga casriga ah ee la sii daayay sannadkan rajooyin badan oo aad u sarreeya ayaa dhacaya, wax hubaal ah in lagu sarraysiin doono soo-saarista Samsung Galaxy S8 dhammaadka Maarso ama bilawga Abriil.
Shirkada Kuuriya waxay dooneysaa inay shacabka ugu wanaajiso taleefanka casriga ah ee cusub ee ay diyaarinayaan, qeyb ahaan inay dhigto meesha ugu sareysa dhacdada Apple bisha Sebtember iyo qeybna si aan u ilawno dhibaatadii ugu dambeysay ee la xiriirta baytariyada Galaxy Note 8. Si aad u badan, in sanadkan aan lagu soo bandhigi doonin qaab-dhismeedka Shirweynaha Caalamiga ah ee Wareegga, laakiin waxay qaban doonaan munaasabad iyaga u gaar ah ujeedadan.
Dhowr usbuuc ka hor waxaan aragnay fiidiyoo shaandheeya muuqaalka suuragalka ah ee Galaxy S8, oo ay la socdaan sawirro qaar, laakiin midkoodna muu muujin gadaashiisa. Marka mala’awaal ayaa bilaabmay maxaa ku dhici lahaa dareeraha faraha ee Galaxy S8: haddii lagu dhex dari lahaa shaashadda ama haddii ay meeshuu tagi lahaa xagga dambe ee boosteejada. Xogaha cusubi waxay xaqiijinayaan maanta in, sida la filayo, akhristaha ku xigi doono kamaradda qalabka. Tani waxay wax ka qabaneysaa suurtagal la'aanta in la dhigo dhinaca hore sababo laxiriira oo la dhimay ugu yaraan.
Arrinta la xiriirta shaashadda shaashadda ayaa ku habsatay Apple ugu yaraan saddexdii sano ee la soo dhaafay, qiyaastii tan iyo markii la bilaabay nooca Plus. Sannadkan waxaan ku hanweynahay inaan aragno wadarta guud ee naqshada casriga cusub ee ay soo bandhigtay Apple laakiin maxaa ku dhici doona akhristaha faraha? Shakhsi ahaan, waxaan ku qiimeeyaa si aad u wanaagsan in ay ku taal xagga hore, taas oo u oggolaanaysa marin fudud oo dhakhso leh. Miyay u malayn doonaan isla Apple?
Waxay u egtahay inaysan macquul aheyn inaan aragno iPhone oo leh akhristaha faraha oo si toos ah loogu daro shaashadda (weli), sidaa darteed xulashooyinka waa inay hayaan - oo ay weheliyaan qolka - ama u dhaafno dhabarka ficil aan sax ahayn helay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Galaxy S8 wuxuu dhaqaajin doonaa akhristaha faraha: maxaa Apple sameyn doonaa?
Apple waxay u maleyneysaa mustaqbalka fog, waan hubaa inay ka shaqeynayaan inay ku daraan shaashadda hore, isla markaana halkaas waxaan ku haynaa badhanka bilowga, haddii ay u maleynayaan inuu lamid yahay samgung, Apple waxaa lagu sameeyay isla 7dii, Apple way ka duwan tahay kuwa khibrada u leh waxaan hubaa inay la qabsan doonaan dareemayaasha shaashadda hoosta shaashadda goor dhow ama goor dambe
Hagaag, Apple waxba ma qaban doono.
Racfaankeedu waa si sax ah in la abuuro, ee aan la raacin.
Jawaab Dunga Din
Big un dijo
Samsung waxay ku deg degtaa inay ka hor marto Apple, hubaal moobilkaas rah ayaa noqon doona
Ku jawaab Big To
Waa hagaag, waa wax aad u fudud .. shaashad aan xuduudo lahayn sida lagu xamanayay sanad, sanad guurada tobnaad = 100% hal-abuurnimo ama macsalaameyn, Apple waxay sii daysay 7-dii sanadood ee hore isla qaabkan maxaa yeelay sida ay sheegayaan wararka xanta / wararka ma aysan heysan alaab-qeybiyeyaal shaashado oled iwm iwm, waxaan rajeynayaa inay tahay naqshad gebi ahaanba ka duwan iyo in Aqoonsiga Taabashadu ku dhex jiro shaashadda.
Apple ma awoodi karto inay hesho wax "loo siman yahay" maxaa yeelay waxay durba lumiyeen iibkoodii 7-dii lagu daray waxayna noqon doontaa "dhamaadka" taleefankooda iPhone .. iyagoo isku dayaya inay siiyaan "isku" biyo saafi ah ...
Waxaan dhihi lahaa midda Samsung soo deysay oo ahayd "qarxin" fashilaad ahayd Galaxy Note 7, ma ahayn 8….
Jawaab Wakandel More
Waxa ugu fiican, sida had iyo jeer, maaha inaad yeelato waxyaabo badan oo laga filayo.
Waxay faallo ka bixinayeen iPhone-ka oo aan xuduudo lahayn dhowr sano oo dheeri ah waxayna eegaan halka moodooyinka lagu daray ee iPhone-kii ugu dambeeyay ay leeyihiin geeso waaweyn
Shakhsiyan waxaan jeclaan lahaa inaan ku arko tan soo socota:
- Looxyo aad u yaraaday oo shaashad badan hela.
- In midabada hore iyo gadaal ay iswaafajinayaan (Qaabka casaanka ah ee sidoo kale horanka ku leh xagga hore oo aan caddaan ahayn. Waana isku mid dahab.)
- Yaraynta badhannada dibedda (isku-darka mugga iyo Aqoonsiga Taabashada ee is-dhexgalka?).
- Kaamirada dambe ma soo baxdo.
- Ka tirtir xargaha gadaal oo xal kale u hel soo dhaweynta.
Ku jawaab AT
Apple wuxuu kordhiyay $ 100 foojar xayeysiiska App Store ilaa Maarso
Codsiyada ayaa beddeli kara astaanta iOS 10.3